Igalelo laseIndiya kwihlabathi, zeziphi ezona zibalulekileyo? | Ukuhamba kwe-Absolut
Icon Yenziwe nge Sketch.
Qashisa iimoto zencwadi
Igalelo laseIndiya kwihlabathi
UAna L. | | Ihlaziywe 19/02/2021 10:37 | Indiya
La Indiya , elo lizwe lilizwekazi ngakumbi ngokwalo kunoRhulumente, ngenxa yalo imbali yemileniyali kunye nenani elikhulu leenkcubeko abo bahlala kuyo ngumseki wobugcisa obuninzi, ifilosofi, ingcinga, inzululwazi kunye nezobunjineli ... singasathethi ke nge-gastronomy kunye neencasa ezityebileyo ezisishiye nemirhumo emininzi evela e-India.
Nazi ezinye ze iminikelo yaseIndiya kwihlabathiUkusukela ngo-Aleksandire Omkhulu, wazisa iindaba zobugcisa, inkcubeko kunye nobugcisa obuhanjiswe kweli lizwekazi.
Ukuqala, ndiza kuthetha ngolwimi, kuba kuthathelwa ingqalelo oko Iilwimi zaseYurophu zavela eIndiya. Kwaye kukho ukufana okubalulekileyo phakathi kwezona lwimi zindala zaziwayo: isiSanskrit, isiLatin, isiGrike nesiPersi.
Ngamafutshane, ndiza kukuxelela ukuba iigrama zaseIndiya zenza udweliso lwezinto ezazisakuba yiSanskrit, ezigqityiweyo nolunye uphononongo lokuthelekiswa kweenkqubo zefonetiki negrama yeelwimi zaseYurophu. Ukuqukunjelwa kwezi zifundo zombini kukuba bekukho isiProto-Indo-Yurophu, ulwimi lweenkobe oluqhelekileyo kwiilwimi ezifundwayo, esenza ukwakhiwa kwakhona kweempawu zefonetiki kunye negrama ekufuneka inazo. I-Indo-European lulwimi olwakhiwe ngokutsha oluqala malunga ne-3000 BC. C.
Ke ukusebenzisa olu lwimi, olwaqala kumawaka eminyaka eyadlulayo eIndiya, ndiza kukuxelela ngamanye amagalelo ale nkcubeko kwabanye.
1 I-Indiya njengomama wefilosofi
2 Inzululwazi kunye negalelo laseIndiya
3 Ubugcisa njengeminikelo evela eIndiya
I-Indiya njengomama wefilosofi
I-Indiya yamkelwe njenge Umama wefilosofi kuba wanika ingcinga yomntu ubuHindu, ubuBhuda, ubuSikh. ENtshona kucingelwa ukuba ifilosofi yazalelwa eGrisi, nangona kunjalo le nkcubeko yayilandela imisinga yengcinga kunye neempembelelo ezivela kwezinye iinkcubeko.
Namhlanje ifilosofi zaseIndiya ziyafundwa kwaye ezinye izixhobo zayo zibandakanyiwe kwindlela yethu yokucinga, njengokucamngca kugalelwe engqondweni, kwaye owona mdla uphambili kubantu abaninzi kuluntu lwanamhlanje lutshintsho olupheleleyo ngokusemandleni, ke ukuba uphumelele, ngokukodwa, kodwa ngokudibeneyo, iya kuba kukuguqula ngokupheleleyo okanye ukuzalwa ngokutsha.
Uyabona, indlela yokucinga indala kangangokuba kule nkulungwane yama-XNUMX ifikelela kwizigidi zabantu abangaphandle kwemida yayo.
Inzululwazi kunye negalelo laseIndiya
U-Albert Einstein wathi umhlaba unetyala elikhulu kumaHindu kuba ngabo abafundisa ukubala. I-Indiya inetyala lesayensi ye-algebra, inkqubo yamanani ngokubanzi. Kucacile ukuba u-zero unetyala elikhulu ku-Aryabhatta, ingcali yokuqala yezibalo kunye nesayensi yeenkwenkwezi ye-classical era ye-Indian mathematics and astronomy. Wahlala phakathi kweminyaka engama-476 no-550, wazalwa eBihar, kwaye imathematika ayiqondwa ngaphandle kwengcinga yakhe ye-0, nangona engakhange asebenzise upelo kunye nezifundo zakhe zokuqikelela kwinani likaPi.
Ukongeza kwi kwimathematika nakwisayensi yeenkwenkwezi ixesha langoku lihlawulwa kakhulu kunyango lwesiNdiya, Ayurveda. Inzala kweli yeza ikhule ngombulelo kuPhando olwenziwe kumaziko awodwa, xa kubonisiwe ukuba imigaqo ye-Ayurvedic iyahambelana nonyango lwangoku kwaye inokungqinwa ngokwenzululwazi.
Ubugcisa njengeminikelo evela eIndiya
Andifuni ukugqiba eli nqaku ngaphandle kokuthetha nge iminikelo evela eIndiya enobugcisa kunye ukuba umhlaba wonke unetyala lenkcubeko yamaHindu. Kwaye sinethamsanqa lokucinga ngobuhle belitye lesikhumbuzo elinje ngeTaj Mahal, isakhiwo sezakhiwo ezakhiwe phakathi kwe-1631 kunye ne-1654 e-Agra ngumlawuli, u-Shah Jahan, uKumkani weHlabathi, njenge-mausoleum ayithandayo umfazi.
Kodwa ukuba uthatha isigqibo sokundwendwela i-India, ngekhe uyeke ukuncoma eminye imisebenzi emikhulu ezisa ubuhle kwihlabathi liphela, njenge-Mosque yangoLwesihlanu, phambi kweRed Fort, eDelhi. Isixeko esipinki saseJaipur, kunye neHawa Mahal okanye iBhotwe leMimoya, Itempile yelanga iKonarak, Fatehpur okanye iQutab Minar, kodwa ukuba kukho ilitye lesikhumbuzo endicinga ukuba ilizwe liphela kufuneka libulele i-India, nguRaj Ghat eNew Delhi, ozinikele kwimemori kaMahatma Gandhi, elula indawo, phantse uhambo olugcwele imbali kunye neemvakalelo. Kungenxa yokuba kuluhlu lweyona inempembelelo kwinkulungwane yama-XNUMX, le ndoda kunye nendlela yayo ekhethekileyo yokuqonda kwezopolitiko ayinakulityalwa. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngomnye wabalinganiswa abatshintshe imbali, kungekuphela ngenxa yenkululeko ye-India, kodwa nangenxa yendlela, kwaye lelo ligalelo alwenzileyo kulo lonke uluntu.
Ngaba uyazi ngaphezulu kwegalelo elivela eIndiya elifanele ukuqaqanjiswa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Igalelo laseIndiya kwihlabathi
Izimvo ezi-39, shiya ezakho
yenzayo 12 iminyaka
Ewe, ndiyazi ukuba kukho igalelo ezi-5
Ewe ndiyavumelana noZulema
Ewe luluvo lwam, ndiyathemba ukuba ndingakunceda
Phendula ku diana
uphando belulungile kakhulu ... enkosi
hahahahaha napazo amantombazana amen mna
Kungcono uthathe umlo omncinci kwaye uvuthe
Ndiyakuthanda atte ukumkanikazi sitsho
Alikho ilizwe laseIndiya lilizwe elihle ndiyakuxelela kuba ndiyayazi kwaye apho ndadibana nothando lobomi bam u-Mario ndiyakuthanda
Phendula ai ndiyakuthanda atte tu reina
Mna ke sitsho
Uxolo olungamawaka nayo iranga
uy upsi ubuncinci kum gague hahahajujuju
Kwaye ndanegalelo ekuphulukaneni nobuntombi bam obuxabisekileyo kunye nomfazi omnyama olapha ukuzalisekisa ireggarton kuyo yonke imilenze emi-4 ... yamazwi
Kukuzonwabisa ndiyathemba ukuba awuthathi izinto ezingafanelekanga zomntakwethu njengokuba zinjalo, okanye ngaba uyijuju yehagu hahaha jujuju hahaha
Yeyiphi into ebambekayo kwiphepha elibuhlungu ngokwenene esele ndiyibonile i-GAS ...
OkuninziSiEl ChAvEs MoorAlS sitsho
Inkcubeko yaseIndiya inomdla kakhulu, inezinto ezininzi zokuyifumana kwaye kufuneka uyifunde kakhulu
Phendula kwiinkqubo ezingaphezulu leeSETYENZELWEYO
ICAMILO APONTTE sitsho
PEPE UKUPHATHA UMAMA WAKHE KAKUBI
Phendula kwiCAMILO APONTTE
ipag entle kakhulu. kunye nemifanekiso ye-bnas ukuvuyisana! qhubeka ngoluhlobo ... c:
njenga! bebibisss…. ukugqabaza iphepha elihle nokudibanisa izinto ezinje
iphepha le-bna njenge-omg! <3
<3 icala elinye leyona ngoma ibalaseleyo, kukuncamisa ungathandi ukuba ungakholwa
Abakhokeli ngokuchasene Abaxhasi (Yo Directioner) ukuba awuphawuli uthanda u-Justin Bieber osea veliever
BENDINGAQONDI NALUTHI »» »
kulungile ukuba ndiqonde i-xd encinci
kude kube bos
AmaHindu abonakaliswa ngokuba ngabokuqala ukuthandabuza inkolo kunye nesiko.
uninzi lwe-minecraf .. i-netflix iyayidlala (i-rafa) …………………………………………….
ULuis Cané sitsho
Ndiyithandile into yokuba ulikhapha eli nqaku kunye neefoto 🙂
Phendula uLuis Cané
Amasiko nezithethe zesiNgesi
Iingcebiso zosuku lokuqala kwindawo entsha
Khetha indawo ekuyiwa kuyo Albacete Alemania IAmsterdam Andorra Argentina Atenas Ostreliya Ostriya Avila Badajoz Badalona Barcelona I-Benidorm Brasil Burgos Cádiz Khanada IItary Islands ECaribbean UCastellón iTshayina Ciudad Real Kholambiya ECórdoba Korea Croacia Tyhubha Basin EDenmark EU.SA Yiputa Elche España Philippines EFransi EGijon Granada EGrisi Guadalajara Holland Hongkong Huelva Hungary Ibiza Indiya ENgilani Ireland Italia EJapan UJerez León Lisboa Londres Madrid Mallorca Marbella Morocco I-Menorca Merida Mekhsikho Miami UMilan Murcia ENorway ENew York Thandaza abanye Oviedo Paris Peru Photshugo Prague Republic Dominican eRoma Russia Salamanca Suecia ESwitzerland Tenerife Toledo Uruguay Venezuela Vitoria
Khetha indawo ekuyiwa kuyo
4 Nina zihotele
Ukuqeshisa Kwam Imoto
Bhalisa ileta yeendaba